ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးတူးမြောင်းနှင့်မြစ်လှေအားလပ်ရက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးတူးမြောင်းနှင့်မြစ်လှေအားလပ်ရက်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 26/09/2020)
ခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးတူးမြောင်းရှာနေနှင့်ဥရောပထဲမှာမြစ်လှေအားလပ်ရက်ဥရောပရှိပါတယ် သိ. လွယ်ကူသောငြိမ်ဝပ်စွာနေလို့ရပါတယ် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းများ. သို့သျောလညျး, ဘယ်မှာအကောင်းဆုံးရွက်အဘို့သွားကြဖို့သိရန် အားလပ်ရက် အစဉ်, သငျသညျအခြို့သောသုတသေနပွုဖို့ရှိသည်. စိတ်ကူးတူးမြောင်းနှင့် riverboat အားလပ်ရက် options များနှင့်အတူငါးနိုင်ငံရှိပါတယ်.
သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါဆုံးသငျစိတျဝငျစားသောတဦးတည်းကိုရှေးခယျြ. အဘယ်အရာကိုအချို့ရဲ့သင်တို့သည်ဤအားလပ်ရက်အပေါ်အချို့သောနာမည်ကြီးတူးမြောင်းနှင့်မြစ်စီးကြတာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်. ဤတွင်ဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏ထိပ်တန်းငါးခုအကောင်းဆုံးတူးမြောင်းနှင့် riverboat အားလပ်ရက်များမှာ:
1. တူးမြောင်းနှင့်မြစ်လှေအားလပ်ရက်များတွင် ပြင်သစ်
ပြင်သစ်ချန်နယ်သို့မဟုတ် riverboat အဘို့များစွာသောဖြစ်နိုင်သောနေရာများနှင့်အတူလှပသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည် အားလပ်ရက်များ. ပြင်သစ်ရဲ့ဒေသအနည်းငယ်ကြောင်းကိစ်စတှငျထွက်မတ်တပ်ရပ်: အဆိုပါမီဒီ, Aquitaine ၏ဒေသ, နှင့်ခမာဂ်. သူတို့တစ်ဦးစီမူထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်.
ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် တူးမြောင်း du မီဒီ, တစ်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များနှင့်နေဆဲမူရင်းသင်တန်းအောက်ပါအတိုင်းကြောင့်ဥရောပမှာရှေးအကျဆုံးအတုရေလမ်း. Pierre ၏ရှင်ပေါလု Riquet ဒီအလုပ်အတွက်ပြီးစီး 1681. လမ်းတစ်လျှောက်, အဆိုပါမီဒီဆင်းဒီလိုမြင်ကွင်း, သငျသညျက Le Somail နှင့် Carcassonne တွေ့နိုင်ပါသည်, နှစ်ခုချစ်စရာကောင်းအလယ်ခေတ်အခြေချနေထိုင်. တဖန်သင်တို့ကိုချစ်လျှင် ကောင်းသောအစာအာဟာရ နှင့် အကြီးအစပျစ်ရည်ကို, သငျသညျမီဒီရဲ့နာမည်ကျော် Minervois နှင့် Corbieres ကြိုးစားနိုင်, နှင့် cassoulet, တစ်ဦး ဒေသခံခဲဖွယ်စားဖွယ်.
တောင်ပိုင်းပြင်သစ်ရဲ့ခမာဂ်အနည်းငယ်ပို ခေတ်သစ်, အဆင်းလှသောနေသာရာသီဥတုနှင့်မြေထဲပင်လယ်၏ရငျးနှီးမှုနှင့်အတူ. သင်ခမာဂ်ခရီးသွားလာနေစဉ်, သင်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့သဘာဝနှင့် birdlife လေ့လာလို့ရပါတယ်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, မြို့ပြဒေသများရှိလည်းရှိပါတယ် ချစ်စရာကောင်းနည်းနည်းကဖေး ကြည့်ရန်.
နောက်ဆုံး, သငျသညျက၎င်း၏ luscious ချိုင့်မှတဆင့် cruise အဖြစ် Aquitaine သင်၏နှလုံးဖမ်းယူပါလိမ့်မယ်, ယင်း၏ရေတံခွန်များနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကမ်းပါးကိုကြည့်. ယူလမ်းကြောင်းများစွာသောလူရှိတယ်, မြစ် Charente ချပင်လယ်ကူးအပါအဝင်. ပြင်သစ်မှာ, သငျသညျယူတိုင်းလမ်းကြောင်းကို enchanting ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အပြည့်အဝကတွေ့ကြုံနေတဲ့အံ့သြဖွယ်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်.
2. တူးမြောင်းနှင့်မြစ်လှေအားလပ်ရက်များတွင် အီတလီ
သငျသညျ channel များကိုစဉ်းစားနဲ့အီတလီလိုက်တဲ့အခါ, စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် ဗင်းနစ်. အဆိုပါဘာသာစကား Venetian ဂွကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ်, တူးမြောင်းနှင့်အတူမှတဆင့်ဖြတ်, ကကမ်းလှမ်း ခရီးသွားများအတွက်မူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို boating ချစ်သောသူ. သို့သော် ပို. ပင်ဒါဗင်းနစ်သူ့ဟာသူ၏တူးမြောင်းပင်လယ်ကူးထက်, အီတလီကမ်းခြေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သူ့ဟာသူကိုမီးမောင်းထိုးပြ.
စတင်သူများအတွက်, သငျသညျ Torcello အဆိုပါ enchanting ကျွန်းများသို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်, Burano, နှင့် Murano ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှအများကြီးရှိသည်. မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်, သူတို့ရဲ့အများအပြားအထူးကုစျေးဆိုင်များ၏တဦးတည်းအတွက်အချိန်ဖြုန်း. အကယ်. မရ, သင်အမြဲဗင်းနစ်အလိုလိုမြို့ကိုအပေါ်ရွက်လွှင့်လို့ရပါတယ်. တိုင်းရေလမ်းအဲဒီမှာလှပသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ ရာသီဥတုကောင်းလှ၏. အီတလီပိုပြီးသာယာလှပခရီးစဉ်များအတွက်မြစ် Brenta သို့မဟုတ် Sile မြစ်ပေါ်တွင်ရွှေ့ ကျေးလက်.
အီတလီနိုင်ငံရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှပဒေသာတယ် ယင်း၏လှပသောမြစ်များနှင့်အတူ, နှင့်ဗင်းနစ်၏တူးမြောင်းတစ်-မဖြစ်မနေတွေ့မြင်နေကြ. သငျသညျဥရောပမြင်ကွင်းများနှင့်လက်ရာမြောက်သောရေလမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုလိုလျှင်, သငျသညျအီတလီမှာသူတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
3. တူးမြောင်းနှင့်မြစ်လှေအားလပ်ရက်များတွင် ဂျာမနီ
ဂျာမဏီကိုသင်ဥရောပအကောင်းဆုံးတူးမြောင်းနှင့် riverboat အားလပ်ရက်ဖျောပွထားသညျ့အခါစဉ်းစားပထမဦးဆုံးရာအရပ်ဖြစ်မပြုစေခြင်းငှါ. သို့သျောလညျး, ဒီတိုင်းပြည်ဝေးစူးစမ်းဖို့လှပသောရေလမ်းချို့တဲ့ရသောအမှုသည်ထံမှ. နှစျခုဒေသများတွင်ကြွင်းသောအရာမှထွက်မတ်တပ်ရပ်: Mecklenburg နှင့် Brandenburg အမည်ရှိသတို့သား, သူတို့ရဲ့နှင့်အတူ ညှို့တတျသော ကဝိုင်းတူးမြောင်းနှင့်ရေကန်များ စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့သစ်တောတွေ.
အဘယ်အရာကိုရဲ့ အထူးသဖြင့်ချစ်စရာကောင်း လမ်းတစ်လျှောက်သင်မြင်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘုံဗိမာန်, အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, နှင့် quaint ဟောင်းမြို့ရွာ. နှင့်သဘောသဘာဝကိုချစ်သောသူတို့အားသာခြောသည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ unspoiled တောပေါများကြွယ်ဝပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဘာလင်ကိုယ်တိုင်ကပင်ဗင်းနစ်မထက်ပိုတံတားများရှိပါတယ်, လုနီးပါး 100 လေ့လာစူးစမ်းဖို့တူးမြောင်း. သို့သျောလညျး, သင့်ရဲ့ဂျာမန်တူးမြောင်းနှင့် riverboat အားလပ်ရက်စွန့်စားမှုလည်း Potsdam နှင့် Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားဆီသို့သင်ယူနိုင်. ဒီထူးခြားတဲ့နှင့်စိတ်ပြေလျော့သွားလမ်းအတွက်ဂျာမဏီစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့.
ဘယ်လ်ဂျီယံမှာကြီးမားတဲ့ဆုကြေးငွေရှိတယ် ၎င်းသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတူးမြောင်းနှင့်မြစ်ကြောင်းလှေအားလပ်ရက်များသို့ရောက်သောအခါဖြစ်သည်. ဤသည်ဆုကြေးငွေကတော့ Flemish ဒေသနှင့်၎င်း၏ရေကြောင်း၏ဂုဏ်အသရေပင်ဖြစ်သည်. အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံရေလမ်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကျေးလက်ပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်း၏သဘောအရအစဉ်အလာမဟုတ်ပေမယ့်, သူတို့ဆက်ဆက်အချို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သောအရပ်တို့ကိုမရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်.
ဥပမာ, Bruges ဆက်ဆက်လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သည်, နှင့်တူးမြောင်းကရှာဖွေစူးစမ်း အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုမှန်ကန်စေသည် ပို. ပင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်. Bruges ၏လေထုထဲတွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းအချို့ရှိသည်, ဗင်းနစ်နဲ့ဆင်တူ. ထိုအခါချစ်စရာကောင်းအလယ်ခေတ်အဆောက်အဦများနှင့်ချောကလက် စျေးဆိုင် ယင်းမှသာ add လေထု.
ထိုအခါ Ypres လည်းမရှိ, သမိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုနှင့်ထူးခြားသော Flemish မြင်ကွင်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအရပျ, အသံ, နှင့်အရသာ. အရသာဘယ်လ်ဂျီယံရန်သင့်လမ်းရွက်လွှင့် လက်ဖြစ်ချောကလက်, တက်ကြွခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်သို့မဟုတ် ဘယ်လဂျီယံဘီယာ. တိုင်းပြည်အပေါငျးတို့သအာရုံအဘို့စင်ကြယ်သောမွေ့လျော်ခြင်းနှင့်တကွသင်ကြိုဆိုပါတယ်ပါလိမ့်မယ်.
အဘယ်သူမျှမစာရင်း အကောင်းဆုံးဥရောပခရီးစဉ် နယ်သာလန်မပါဘဲပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်. ဒါကဥရောပအကောင်းဆုံးရုပ်သံလိုင်းနှင့် riverboat အားလပ်ရက်ပူဇော်ကြောင်းနေရာများပါဝင်သည်. ရေလမ်း၏နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာအပေါ်နေရာမှကိုရှာဖွေခဲ့, ၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များကိုမှမရှိစေရန်, သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ နှင့်ရွက်၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး.
ဒတျချြကျေးလက်နှင့်၎င်း၏ရေလမ်းကိုကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံပူဇော်. မည်သည့်နေရာမျှထိုကဲ့သို့သောချောမွေ့စွာရွက်လွှင့်နိုင်ခြင်းကိုဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိပါ သေးငယ်တဲ့ကျေးရွာများ ဤမျှလောက်များစွာသောလှပသောမြင်ကွင်းများမှလာမယ့်. ရိုးရာ-ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြတ်သန်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ဒတ်ခ်ျလေရဟတ်, သူတို့ရဲ့မှတ်မိပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်ကျက်သရေနှင့်အတူ. စိတ်ကူး အဆိုပါ tulips မှာရှာဖွေနေ အဆိုပါဖရီစီရဒေသဖြတ်သန်းနေစဉ်လေပြေယိမ်းနွဲ့.
ဥရောပတစ် Riverboat အားလပ်ရက်စီစဉ်? စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်ပျော်မွေ့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ja သို့မဟုတ် / နှင့်အခြားဘာသာစကားများရန် / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#တူးမွောငျး #riverboat #ခရီးစဉ် europetrains eurotrip trainjourney